ဘယ်လိုသင်ကြားရမယ်ဆိုတာလေး .... — MYSTERY ZILLION
August 2008 edited May 2010 in Project
တာ၀န်ရှိသူများအားလုံးနှင့် ဆရာများအားလုံးခင်ဗျာ ...
အခု သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သင်ကြားပေးမည် ...မည်သို့ မည်ပုံတက်ရောက်ရမည်ဆိုတာလေးကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ဘာသာတွေကိုကော ဘယ်လို ယူနိုင်မလဲ ...တစ်ခုတည်းပဲလား ..ဒါမှမဟုတ် ..စိတ်၀င်စားတဲ့ လေ့လာလိုတဲ့ ဘာသာတွေကို ( အများ ) ပေါ့ ...အဲဒါလေးတွေကိုကော ...
နောက်တစ်ခုက သင်တန်းကို ဘယ်လိုအပ်ရမယ် ...ဘယ်လို၀င်ပြီးသင်ခန်းစာလိုက်ရမယ် ဆိုတာလေးတွေကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါလို့ ...
( ကျွန်တော်မေးထားတာတွေက အရမ်းများပြီး ကလေးဆန်နေရင် ခွင့်လွတ်ပါ ခင်ဗျာ )
လေးစားစွာဖြင့် ( တာယာ )
http://www.edu.mysteryzillion.com မှာ Sing Up အရင်လုပ်ပါ။ပြီးတော့ကိုယ်သင်ကြားချင်တဲ့ Subject တိုင်းကိုသင်ကြားနိုင်ပါတယ်။တက်ရောက်တာကတော့ အစ်ကိုတာယာ Internet သုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ၀င်ပြီးတင်ယူလိုက်ပေါ့။
ကျွန်တော်က Pro မဟုတ်ပါဘူးမွေးကင်းစကလေးပါ အက်တမင်တွေ online မှာမရှိလို့၀င်ပြီးဆရာနည်းနည်းလုပ်လိုက်တာပါ။
အပြစ်ဖြစ်သွားရင်သားသားကိုခွင့်လွှတ်ကျပါခင်ဗျား။ :103: :103: :103: :103:
တာယာ wrote: »
မေးထားတာတွေကို ပြန်ဖြေရရင် ....
၁။ သင်တန်းတွေမှာ weekly နဲ့ topic ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။
၁.၁၊ weekly အုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ အတန်းတွေမှာတော့ အပတ်စဉ် သင်ခန်းစာအသစ်တွေကို ဆရာတွေကတင်သွားမှာပါ။ အဟောင်းတွေကလဲ အရင်အတိုင်းရှိနေဦးမှာပါပဲ။
၁.၂၊ topic အုပ်စုထဲမှာပါတဲ့အတန်းတွေမှာတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနေအထားရယ် သင်ခန်းစာရဲ့ အတိမ်အနက်ရယ်ကိုမျှပြီး၊ အဆင်ပြေသလိုအသစ်ကို တင်သွားမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး(၇)ရက်နဲ့ အများဆုံး (၁၄)ရက်အတွင်း သင်ခန်းစာအသစ်တက်မှာပါ။
၂။ ကိုယ်၀ါသနာပါရာနဲ့ ကိုယ်လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ချင့်ချိန်ပြီး ကြိုက်ရာ အတန်းကိုတက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကန့်သတ်ချက် လောလောဆယ်မရှိသေးပါ။
၃။ လောလောဆယ်အားဖြင့်ကတော့ register လုပ်ပြီး login ၀င်လိုက်ရင် ကျောင်းအပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
ကဲ .. ဒါဆိုရှင်းပြီထင်ပါတယ်။
ဖြေကြားပေးတဲ့ ကိုGipsy နဲ့ ကိုTweetyCoaster တို့အား ကျေးဇူးအထူးပါ ခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော်လဲ သိသွားပြီ ...ကျန်တဲ့သူတွေလဲ သဘောပေါက်သွားတာပေါ့ ...
သင်တန်းကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပါမည် .....( အင်တာနက် မကောင်းတဲ့နေ့မှလွဲပြီး :D:D)
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ( တာယာ )
http://www.edu.mysteryzillion.com သို့၀င်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီကို၀င်လိုက်ရင် http://www.mysteryzillion.com (HOME PAGE) ကိုပဲရောက်ရောက်သွားနေလို့ပါ။ ကျွန်တော့်ဖက်က ဘာများမှားယွင်းနေလဲ နည်းနည်းလောက် အကြံပေးကူညီကြပါဦးဗျာ။
မှာ .com မဟုတ်တော့ပါ။
အခုမှ edu ဆိုတွေ့တာပါ ၀င်ကြည့်တော့
www.edu.mysteryzillion.org ကအခု Restricted Access ဆိုပြီပြနေတယ်။ ဘာမှလဲမပေါ်လာဘူး
vbthang wrote: »
ဟုတ်တယ်ဗျ.အခုမှ ၀င်ကြည့်မိတာ.. Restricted Acess ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်... ဟိုးအရင်တုနး်က တော့ ၀င်ဖူးပါတယ်.အဲဒီတုန်းက အဆင်ပြေပါတယ်...
Now, i got it friend.
But, i don't know how to learn in edu.
And where can i choose the course?
Can u reply as soon as u can
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link က၀င်လို့မရတော့ဘူးဗျ
ဒီအတိုင်း၀င် http://edu.mysteryzillion.org ဆိုရင်ရပြီဗျား
ကျွန်တော်က အသစ်လေးပါ.. ရှာတာ ဖတ်တာလည်း မူးနောက်နေပါပြီ.... တွေ့လား၊ မတွေ့လားလည်း မသိတော့ပါဘူး ကျွန်တော် MZ မှာ စာသင်ချင်ပါတယ်... ဘာတွေ သင်လို့ရတယ်... ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်...ခု သင်လို့ ရ မရလေး သိချင်ပါတယ်........ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ
ကို zawmio ေပးတဲ့လင့္ေတြ၀င္တာမရလို့ပါ...ကူညီေပးျကပါအံုး..စာသင္ခ်င္လို့ပါ